छोरी जन्मिएपछि लोक गायिका शान्ति श्री परियार पहिलोपटक मिडियामा, किन अन्तरबार्तामै झारीन आँसु ? (भिडियो सहित) – Namaste Host
March 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on छोरी जन्मिएपछि लोक गायिका शान्ति श्री परियार पहिलोपटक मिडियामा, किन अन्तरबार्तामै झारीन आँसु ? (भिडियो सहित)
काठमाडौ – लोकप्रिय गायिका शान्तिश्री परियारले पुत्री लाभ भएको छ। छोरी जन्मिए संगै उनि पहिलोपटक मिडियामा आएकी हुन्। छोरी र आमाको स्वस्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । परियारले १० बर्ष पहिलेनै नारायण भुजेल सँग बिहे प्रेम बिहे गरेकी थिइन् ।
यो क्षेत्रमै पहिलो पटक आफ्नो आवाज दिई आधुनिक गीत गाए बावत पाएको पहिलो पारीश्रमीकले आफुलाई खुसिको आँसु आएको र गाएरै जिवन धान्न सकिने हौसला समेत प्राप्त भएको बताउनु हुन्छ । आफु यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे सँगै अग्रजकलाकारहरुले गर्नुभएको मायाले गर्दा आफुलाइ स्रोता र दर्शकले गायीका शान्ती श्री परियारको रुपमा नाम दिएको बताउनु हुन्छ । आज सम्म मलाई यो स्थान सम्म ल्याइपुराउनको लागी मलाई जुन रुपले माया गरिरहनु भएको छ त्यो माया मैले निरन्तर पाउने छु भन्ने आशा लिएकी छु ।